Saraakiisha ciidamada qalabka sida ee DFS oo bulshada Guriceel kala hadlay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen adkeynta amniga magaalada+Sawirro – Radio Muqdisho
Saraakiisha ciidamada qalabka sida ee DFS oo bulshada Guriceel kala hadlay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen adkeynta amniga magaalada+Sawirro
kulankan waxa uu ka dhacay xaruunta Taliska Booliska degmada Guriceel, waxaana isugu yimid saraakiisha ciiqamada qalabka sida ee dowlada federaalka Soomaaliya iyo qeybaha kala duwan bulshada magaaladaasi.
Kulankaan sidoo kale waxa goobjoogka ahaay masuuliyiin ka socotay maamulka degmada, madaxda Garsoorka degmada, culumada deegaanka iyo shacabka magaalada.
Kulanka waxa looga hadlay xoojinta midnimada ,wadajirka iyo nabada deegaanka iyo sidii shacabka iyo dowladu isaga kaashanlahaayeen xaqiijinta amaanka degmada.
Masuuliyiinta iyo bulshada degmada Guriceel ee madasha ka hadlay ayaa balan qaaday in ay si dhow ula shaqeynayaa ciidamada qalabka sida ee ka shaqeynaya amaanka magaalada.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada oo war ka soo saartay fatahaadaha wabiyada dalka.
Madaxweynaha Koofur galbeed oo kulan la qaatay bulshada magaalada Baraawe